Kismaayo News » Gudoonka baarlamaanada oo Baydhabo fadhiistay
Gudoonka baarlamaanada oo Baydhabo fadhiistay
Kn: Xarunta ku meel gaarka ah ee maamul gobolleedka Koonfur Galbeed, Baydhabo Janaay ayaa martigalisay kulan ay ku shawrayaan gudoonnada baarlamaanka maamul gobolleedyada iyo kan dawladda federaalka Soomaaliya.
Kulankan oo ay kasoo qayb galeen gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka iyo kuxigeenkiisa 1aad, iyo gudoomiyeyaasha baarlamaanada Koonfur Galbeed, Jubbaland, Puntland, Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa lagu gorfayn doonaa umuuro la xiriira turxaan bixinta shuruucda dalka iyo qaabkii ay u wada shaqayn lahaayeen baarlamaanka dawladda dhexe iyo baaralamaanada dawladaha xubnaha ka ah.
Kulankan Baydhabo lagu qabtay ayaa ku soo aadaya maalma uun kadib markii xarunta maamul gobolleedka Puntland ee Garoowe uu ku soo idlaaday kulan dhanka dastuurka ku saabsan oo ay yeesheen wasaaraddaha dastuurka dawladda dhexe iyo kuwa maamul gobolleedyada.
Dad badan ayaa u arka shirarka noocan oo kale ah kuwo tamashlayn iyo lacag khasaarin ah maadaama ilaa iyo hadda uusan jirin shuruuc dhamaystiran oo dalka laga hirgaliyay, halka qaar kale ay aaminsanyihiin in arintani ay wax ka tarayso dhinaca is dhexgalka iyo talowadaagga.
Maxaabiis Hindiya ku xirnayd oo dalka la keenay
Farmaajo oo dowguduudda Guriceel ku dakeynaya
Gaas oo Dhuusamareeb ku soo booqday dugsigii uu ka baxay
Damaashaadka Culimada, Goobweyn ayay ka shidantahay